Umbala ophuzi waba umholi othembekile wokuqoqa imfashini ekwindla yokugcina. Futhi ngesikhathi samanje sonyaka ka-spring-ehlobo, izigqoko zelanga zizinzile ngokuqinile kwi-TOP yezinto ezihamba phambili nezindabuko zenkathi efudumele. Thina nabadwebi be-Italian-Russian brand Bizzarro bathola ukuthi kanjani nokuthi lelihlobo lizogqoka umbala ophuzi.
Imfashini yefashini yehlobo 2015: iphuzi elimnandi nelomngane
Umbala oshisayo welanga ungahlanganiswa nezinto ezihlukene: ungavuselela noma yisiphi isithombe. Ngisho nezimboni zezimpahla ezinzima zebhizinisi zingahle zifake imfashini kulelihlobo: vele uhlaziye ibhizinisi ngesigxobo esikhwameni esiphuzi, ubucwebe noma izicathulo.
Abathandi bezimpahla zebesifazane bangathenga ngokuphepha imidwebo ephuzi ngenhla nje kwedolo. Futhi abachwepheshe bama-raznotsveta kufanele babheke izingubo ezinemibala emibala. Amabalazwe afaka imfashini emibala ye-pastel, edingekayo ngenkathi entsha, iqala ukukhangisa ngenxa yomthunzi onobuhle obumnyama. Izithombe ezinjalo zingagqoke iziketi noma amabhulukwe emibala ekhanyayo.
Uphuzi olunamandla nolumnandi luzovusa kalula owesifazane wefesimusi emva kwebusika ebanda futhi epholile entwasahlobo. Eqoqweni lezimfashini kunezinhlobonhlobo ze-shade yembala enelanga: kusuka uju kuya kulamula, kusuka emasinini ukuya e-pastel ophuzi.
Yini okufanele uhlanganise umbala ophuzi ofashini
Ukuba mnandi kunzima. Kwanele ukukhetha izingubo ezimfashini bese uthatha izingubo ngezwi. Isibonelo, ibhulukwe eluhlaza okwesibhakabhaka noma isiketi sibukeka kahle nge-blouse ephuzi. Ngenkathi eminye imibala ekhanyayo ingaba yindlela eyisisekelo ngendlela enhle, ama-shade elangeni ngokuvamile asetshenziswa njengemibala eyengeziwe.
Ingabe ufuna ukudala isithombe esicacile? Ngakho udinga ukufakazela ikhabethe lezingubo nezesekeli ze-shades ezimnandi ze-orange. Uma lokhu kuhlanganiswa kukhethwa ngabanye abanesibindi, ukuxuba okwesibhakabhaka nokuphuzi kufanele kube yinto ebaluleke kakhulu emfanekisweni wefashini wabo bonke abesifazane abazethembayo. Uhlobo lomvelo lungayithokozisa inhlanganisela ephumelelayo yemfashini eluhlaza, ophuzi nobomvu.
Indawo ekhethekile esimweni sehlobo sasehlobo sonyaka ka-2015 sithatha umbala wewayini, ongahlanganiswa nophuzi, udala isithombe esinesibindi nesingavamile. Futhi emgqeni ophezulu ohlwini lwazo izinto ezifashisayo kakhulu zigqoke izigqoko zama-feminine ngephethini elincane elimibalabala lwe-shades ephuzi.
Indlela yokugqoka kahle ebusika
Izingubo zentwasahlobo ezenza imfashini 2016
Umbala omuhle kakhulu we-2018 uwububende: Ungakugqoka kanjani ngendlela efanele
Isikhathi sokudla ngezikhathi zokudla zaseKorea
Izithelo zomuthi izithelo
Izakhiwo zokuphulukisa kwamafutha omvini
Izifo ezivamile ezingekho ngempela
I-Horoscope ye-Virgin Woman ngo-December 2016
Vumbela ngokufingqa: indlela yokuziphendulela zibe yizinzuzo
Amaqiniso amancane awaziwa nge lipstick
Ukuxhomeka kwezibuko noma ukuxhumana nama-lens